Tag: software sebasa » Martech Zone
Tag: software sebasa
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Kwakave nemazuva apo makwikwi ekubudirira kwevatengi achishanda nesimba risingaperi uye vatengi kubata. Nekuti ino ndiyo nguva yekukwira zvishoma uye kugamuchira zvakawanda maererano nekubudirira kwevatengi. Zvese zvaunoda mamwe marongero akangwara, uye pamwe rumwe rubatsiro kubva kune SaaS kunyorera kambani yekuvandudza. Asi, kunyangwe zvisati zvaitika, zvese zvinodzikira pakuziva maitiro akakodzera ekubudirira kwevatengi. Asi kutanga, une chokwadi here kuti unoziva iyo temu. Ngatitaurei
Nguva Yokuverenga: 6 maminitsi Ndeipi yako yekutanga nhamba yekutarisa sekambani yeSawaS? Kukura, hongu. Kubudirira kwedenga kunotarisirwa kubva kwauri. Zvakakosha kuti urarame kwenguva refu: Kunyangwe kana software software iri kukura pa60% pagore, mikana yayo yekuve mabhiriyoni emadhora hofori haisi nani kupfuura 50 / 50. McKinsey & Kambani, Kukura nekukurumidza kana Kufa Mwedzi Unononoka pamusoro pemwedzi. kukura kunokosha kuvhara kurasikirwa kubva kumakambani eChurn SaaS anowanzoitika. Kukunda zvinotarisirwa uye
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Rivalfox inounganidza data kubva kwakasiyana masosi pane vako vakwikwidzi uye inoita kuti data riwanikwe nyore kubva kune mumwe mukwikwidzi wedhata hub. Zvinyorwa zvinosanganisira traffic, kutsvaga, webhusaiti, tsamba yemapepa, mhizha, zvemagariro uye kunyangwe vanhu uye shanduko yebasa. Rivalfox ndeye SaaS mhinduro inoisa yekucheka-pamucheto kukwikwidzana njere mumaoko ako. Tinotenda kuti nekudzidza kubva kumakwikwi ako, unogona kukura nekukurumidza, kudzivirira zvikanganiso uye kuwana mukana. NaRivalfox, makambani eese saizi anogona
5 Software seSevhisi Chibvumirano Scams yekudzivirira
Mugovera, Mbudzi 9, 2013 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Sesangano rinotsigira zvizere vatengi vedu, isu tinotenga zvibvumirano zvekushandisa uye mapuratifomu zvakati wandei kuti titsigire zvizere kuedza kwevatengi vedu. Mazhinji eaya hukama neSoftware seSevhisi (SaaS) vatengesi inonakidza - tinogona kusaina online uye tinogona kukanzura kana tapedza. Mugore rapfuura, zvakadaro, isu takanyatso kutorwa pazvibvumirano zvishoma. Pakupedzisira, yaive yakanaka kudhinda kana kutsausa kutengesa kwakatungamira kune
Chitatu, Nyamavhuvhu 29, 2012 China, Kukadzi 25, 2016 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Sevashambadzi, isu takakomberedzwa nedata. Nezuro chaiye ndanga ndichigadzira SEO kufambira mberi mushumo wakandiunza kubva padanho rekutevera, dhata reWebmasters, data reGoogle Analytics uye Hubspot kuisa mameturu akakosha uye kuenzanisa kuzivisa kuti ive chokwadi. Business Intelligence (BI) mhinduro dzave dzakatenderedza munzvimbo ye Enterprise kwenguva yakati rebei uye dzaiwanzo kuve mutengi / server kuisirwa ine marefu ekushandisa macirc ... dzimwe nguva makore. Mhinduro yeBI yaizondigonesa